जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आन्तरिक तयारी – Kadar News : Oneline Digital News:
जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आन्तरिक तयारी
लेखक : शम्भु दंगाल
प्रकासित : १७ कार्तिक २०७७, सोमबार १०:४३
१७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमको तयारी तीव्र रूपमा थालिएको छ । आगामी २०७८ सालमा हुने जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आन्तरिक तयारी थालेको हो ।
निर्देशक लामिछानेले भने– ‘हामी अनलाइन भर्ना प्रक्रिया खोल्छौँ, त्यसका लागि एक, दुई महिनाको समय दिन्छौँ । गणकहरुमा स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा हामी मान्छे लिन्छौँ । हामीले केन्द्रबाट, जिल्लाबाट पठाउने हैन, स्थानीय तहमै बसोबास गर्ने मान्छेलाई
लिन्छौँ । अनलाइनमा आवेदन परेपछि सर्ट लिस्टमा राखेर जिल्लाले भर्ना गर्छ । गणकका लागि १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्छ । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ ।’
सामुदायिक प्रश्नवली वडा कार्यालयलाई लक्षित गरेर प्रश्न गरिने, वडामा स्वास्थ्य सुविधा कस्तो छ ? स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? विपदको जोखिमको अवस्था कस्तो छ ? वडामा सहरीकरणको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका वडा कार्यालयलाई समेत प्रश्न गरिने व्यवस्था गरिएको
अगामी चैत १ गतेदेखिबाट प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला जनगणना कार्यालय खुल्नेछ । यस्तै सात प्रदेशमा पनि कार्यालय खुल्नेछ । ७७ जिल्ला भए पनि जनसङ्ख्या धेरै भएका केही जिल्लामा थप कार्यालय गरेर ८० वटा जिल्ला कार्यालयहरु सञ्चालन हुने निर्देशक लामिछानेले जानकारी
केन्द्र र प्रदेशमा तालिमकर्ताका लागि तालिम हुन्छ भने जिल्ला र स्थानीय तहमा भने गणकका लागि तालिम कार्यक्रम हुने योजना बनाइएको